Vaovao - Ahoana ny fisafidianana mpandrindra tsindry gasification azo antoka sy avo lenta?
Ny tsindry gasification LNG mifehy ny skid dia mampifangaro ny fizotran'ny fanamafisana, ny fifehezana ny tsindry ary ny fofona. Raha ny fepetra takian'ny mpampiasa dia azo omena ny drafitry ny vokatra mifanaraka amin'ny filan'ny mpampiasa isan-karazany. Voalamina tsara ny haitao mifangaro mipetaka amin'ny rindrina, mety tsara ny fitaovam-pitaterana, tsara tarehy ny bika aman'endriny, ary kely ny haben'ny gorodona. Kely ny habeny ary mora tazomina, dia be mpampiasa amin'ny famatsian-tsolika vonjy maika, famatsian-tsolika trano ary famatsiana entona famokarana mpampiasa indostrialy.
Ny tsindry gasikara LNG mifehy ny fitetezana dia mety tsy dia fahita loatra amin'ny fiainantsika, saingy mbola misy toerana maro izay ampiasantsika gazy amin'ny fiainantsika. Rehefa mampiasa fitaovana entona hifehezana ny tsindry dia mieritreritra ny fisian'ny mpandrindra ny tsindry entona isika. Koa satria mila manitsy ny tsindry isika rehefa mampiasa fitaovana entona, dia tsy maintsy misafidy mpandrindra tsindry avo lenta isika hiantohana ny fiasan'ny fitaovana mahazatra.
Misy fomba maro ihany koa hisafidianana ireo fitaovana mifehy ny tsindry LNG avo lenta.
Rehefa misafidy isika, ny fiarovana ny fitaovana no jerena voalohany. Amin'ny alàlan'ny fiantohana ny fiarovana ihany no ahafahan'ny fitaovana entona miasa tsara kokoa ary miantoka ny fiasan'ny fitaovana mahazatra. Rehefa misafidy mpandrindra solika eny an-tsena isika dia tsy maintsy misafidy marika fanta-daza hividy. Ny fitaovana toy izany dia azo ampiasaina amin'ny kalitao azo antoka sy serivisy aorian'ny varotra, ary azo antoka ihany koa izy io.
Rehefa mividy ny entona LNG sy ny fitaovana mifehy ny tsindry isika dia tsy maintsy misafidy ny maodely mifanaraka amin'ny fitaovana entintsika manokana, mba tsy hitrangan'ny tsy fahombiazan'ny fametrahana mandritra ny fizotry ny fametrahana. Noho izany, aza hadino ny mamaritra ny maodelin'ny fanamafisam-peo alohan'ny fividianana, ary avy eo safidio tsara.
1. Fandidiana sy fikojakojana tsotra;
2. Firafitra mifangaro sy habaka gorodona kely;
3. Tohano ny fanaraha-maso lavitra, izay mety hahatsapa fiasa tsy misy mpiambina;
4. Fanafanana sy fanamafisana ny rivotra iainana, mampihena ny vidin'ny asa;
5. Fitaovana skid-nitaingina iray, fametrahana mora ary vanim-potoana fananganana fohy;
6. Finday be ny fitaovana ary azo ampiasaina indray na imbetsaka;
7. Ampidiro ny pressurization famoahana tobin-tsolika LNG, fanerena ny fitoeran-drano fitehirizana, fitrandrahana, fifehezana tsindry, fandrefesana, fofona, ary fifehezana herinaratra ao anaty iray.
Amin'ny alàlan'ny fisafidianana ny tsindry haingam-pandeha avo lenta LNG mifehy ny skid ihany no azo antoka ny fiarovana ny fampiasana.